Nagu saabsan - Hebei Chengye Technology Intelligent Co., Ltd.
Hilibka la qaboojiyey
Mashiinka wax lagu karsado
Hebei Chengye Technology Intelligent Co., Ltd.
Hebei ChengYe Intelligent Technology Co., Ltd. (Code Equity: 838358) waxaa la aasaasay 2007. Waxay ku taal aagga Dhaqaalaha & Farsamada, Magaalada Shijiazhuang, Gobolka Hebei, shirkadeena waxay ku takhasustay cilmi baarista iyo soo saarida mashiinada ka baaraandega cuntada iyo qalabka aan caadiga ahayn. Shirkaddayadu waxay noqotay soo saaraha ugu horreeya warshadaha cuntada.
Mashiinnadayada waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha wax soo saarka hilibka, qamadiga iyo warshadaha wax soo saarka cuntada si dhakhso ah loo qaboojiyey.
Badeecadaha ugu waaweyn waa seddex-geesood Hilibka Dicer-qaboojiyaha ah, Xawaaraha Bowl-Xawaaraha Sare, Qiiqa guryaha, Vumum Qaboojiyaha Tumbler, Vacuum Burka Mashiinka, Noodle Processing Line, Mashiinka sameeya Shaomai, Mashiinnada Waxsoosaarka Khudaarta iwm.
Shirkaddayadu waxay leedahay dhowr shati qaran, wax soo saarka ugu muhiimsan ayaa ka gudbay Shahaadada CE, oo loo iibiyey Yurub, Oceania, America, Afrika, Mideast iyo Koonfur-bari Aasiya waxayna ku guuleysteen sumcad wanaagsan macaamiisha.
Shirkad tiknoolajiyad sare ah, waxaan muhiimada siineynaa horumarka tikniyoolajiyadda. Dhanka kale, iyadoo lagu saleynayo naqshadeynta adag iyo awooda dhisme ee kooxda Chengye Construction Group, waxaan bixin karnaa adeeg taxane ah iyo taageero farsamo, sida dib u dhiska iyo ballaarinta warshadaha cuntada, qorsheynta iyo naqshadaynta dhulka, dhisida aqoon isweydaarsiyo, rakibida iyo hawlgalinta qalabka cuntada iyo dhuumaha, iwm.
Wax ku ool ah oo hal-abuur leh, dadka ChengYe waxay u hoggaansamaan falsafadda maaraynta: "Daacadnimo iyo Tayo Koowaad" iyo aragtida qiimaha ee "Hufnaan iyo Wax-ku-ool ah, Hal-abuurnimo, Isku-kalsooni iyo Ganacsi Halis", iyagoo ku dadaalaya sidii ay u noqon lahaayeen shirkad tiknoolajiyadeed iyo caqliyeed ugu horreysa!